Vamwe vakasungwa inhengo dzedare reparamende dzinosanganisira VaFani Munengami naAmai Ronia Bunjira.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanosanganisira VaPromise Mkwananzi, VaStern Zvorwadza, mufundisi Phillip Mugadza nevamwe.
Asi vamwe vakasungwa gore rapera vana vanoti Muzvare Lynette Mudewe veZimbabwe Activists Alliance, VaDirk Frey, VaAlvin Takavada naVaElvis Mugari vakaendesawo kumatare mukuru wemapurisa, vaaugustine chihuri, vachiti kusungwa kwavakaitwa gore rapera kwainge kusiri pamutemo.
Vana ava vakasungwa vachiratidzira kuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaPhelekezela Mphoko, vabude muhotera yeRainbow Towers yavaigara vachiti vainge vasati vawana imba yakakodzerana nechimiro chavo.
Vana ava vanoti vanoda mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora.
Nemusi weMuvhuro imwe nyaya yevanhu makumi manomwe nevana vakasungwa musi wa4 Chikunguru 2016 pakuratidzira kwakavharisa maguta akawanda kuchitungamirwa neve Hash Tag This Flag neveTajamuka hakuna kuzoenderera mberi mudare ramejastiriti sezvo vachuchusi vati vanoda nguva yekuunganidza humbowo.
Gweta revanhu ava richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaTrust Maanda, vanoti vachuchusi vakauya vasina kugadzirira musiwa 31 Ndira vachikumbira dare kuti riti vanhu ava havana mhosva.